Ganacsatada Soomaalida ee K/Afrika oo dukaamo laga rartay
March 23, 2012 Markacadeey
In ka badan 20 dukaan oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed oo ku yaalla magaalada Cape-town ayaa shalay laga rartay alaabooyin aan tayadoodu wanaagsaneyn oo yiilay dukaamadaasi, kaddib markii howlgallo ay ku qaadeen waax ka tirsan dowladda hoose iyo boolika dalka Koonfur Afrika.
Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee uu howlgalkaasi saameeyay ayaa ku dooday in alaabtooda qaar ka mid ah ay tayo ahaan wanaagsaneyd, isla markaana ay shaqaalaha dowladda hoose rerteen iyagoo aan hubin.
Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Western Cape ee waddanka Koonfur Afrika Cabdi Jidow ayaa Bar-kulan u sheegay in baaritaannada lagu qaado alaabaha Soomaalida ay yihiin kuwa soo noq noqda, wuxuuna sheegay in howlgalkan uu yahay kii ugu ballaarnaa muddooyinkan.
Howlgalkan ayaa saameeyay 50 dukaan oo ay leeyihiin ganacsato Ethiopian ah, waxaana laga rartay alaabihii yiilay, kuwaasi oo dhammaantood ahaa alaabo aan tayadoodu fiicneyn, dukaamada alaabooyinka laga rartay waxay ku yaallaan xaafadda ay Soomaalida ka deggan tahay ee Bellevilla ee magaalada Cape-town.
Si kastaba, howlgalkan oo dhowr jeer soo noq noqday ayaa la sheegay in ay sabab u yihiin ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Ethiopia oo ka madax adeegay in ay joojiyaan gedista alaabaha tayadoodu ay liidato oo ay ka mid yihiin dhar ay sameeyaan shirkadaha Nike, Adidas iyo Puma.